ဗီယက်နမ်သို့ အလုပ်သွားလုပ်ခြင်း နှင့် ဆောင်းပါးများ ကောက်နုတ်ချက် (Zaw Aung (Monywa)) | MoeMaKa Burmese News & Media
ဇော်အောင်(မုံရွာ) - အင်တာနက်မရှိသော တက္ကသိုလ်အတွက် အခမဲ့-ဝိုင်ဖိုင်
ဇော်အောင် (မုံရွာ)၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၂
မော်တော်ဆိုင်ကယ်မစီးတတ်လျှင် မဖြစ်သည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Only In Vietnam ဓါတ်ပုံများဖြင့် စတင်ပါမည်။
ယခုဓါတ်ပုံများကို သင်မြင်သောအခါ ရယ်စရာဖြစ်နေပေမည် (သို့မဟုတ်) သြော်..ဟု တမ်းတပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပေမည်။ ဗီယက်နမ်တွင် ထိုကဲ့သို့မြင်ကွင်းများမှာ ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ပါ။ သက်သက်သာသာပင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြပါသည်။ သက်သက်သာသာပင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် အဖေ၊အမေ၊သား၊သမီး ..တစီးတည်း ပြွတ်ကျပ်စီးနင်း၊ ခရီးသွားနေကြသည်မှာ လမ်းပေါ်တက်သည်နှင့် နေ့စဉ်ဓူဝ မြင်တွေ့နေကျဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်တွင် တချိန် အနှေးနှင့်အမြန် ဗီယက်နမ်ကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေ.. ထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ကိုးရီးယား၊ဂျပန်၊အမေရိကန် ..စသဖြင့် မိမိရောက်ဖူးသော နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်က မြန်မာပြည်ကို ထိုတိုးတက်သော နိုင်ငံအဆင့်သို့ ရောက်စေချင်လှပေမည်။ ငါတို့ စင်ကာပူတုံးက ဘယ်လိုကွ..ဘာညာကွိကွ ပြောဆိုနေသော်လည်း လက်တွေ့တွင် မြန်မာဓလေ့ထုံးစံ၊ စရိုက်လက္ခဏာများတွင် အဆိုးများပြားနေပါသည်။ မြန်မာပြည်ကမှ တော်သေးတယ်..ဟု .. အင်တာနှေး၊ ၀က်သားဈေး၊ ဈေးကြီးသော အချိုရည်၊ အိမ်ယာဈေးများတက်ပြီး မိမိပိုင်ဆိုင်မှု အရမ်းဟုတ်လှပြီ ထင်ကြပါသလား။
ပြည်ပ (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းတွင် လခစားလုပ်စားသူများ နားလည်ပေမည်။ Basic Pay ဆိုတော့ လခ ရှိသည်။ လစာ တလ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရတယ်ကွာ၊ အိုဗာတိုင်နဲ့ဆို၊ စားစရိတ်၊ခရီးစရိတ်ပေါင်းတော့ မဆိုးဘူး ..ဟုပြောကြသည်။ တကယ်တော့ Basic Pay ဆိုသည်မှာ ၀န်ထမ်း၏ တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ Basic Pay $1000 ရသောသူ အလုပ်ပြောင်းပါက ကုမ္ပင်္ဏအသစ်က လစာ ၂၀၀ခန့်သာ တိုးပေးနိုင်မည်။ အလွန်တော်သူများမှာ Basic Pay $2000 ၂ဆ တိုးပေးကောင်းပေးမည်။ ထိုပျမ်းမျှလစာ ဆိုသည်မှာ လူတစ်ယောက်၏ တစ်လ၀င်ငွေဖြစ်သည်။ လစာကတော့ မဖြစ်လောက်ပါဘူး။ အောက်ဆိုဒ်က သိပ်ကောင်းတာပဲ ..ဟုပြောဆိုသော မြန်မာပြည် အစိုးရအလုပ်ကိုင်များ မကြာမှီ ဆိတ်သုန်းခန်း ရောက်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။
Basic Pay အကြောင်း ရေးသားရခြင်းမှာ တတိုင်းပြည်လုံး၏ ပျှမ်းမှ ၀င်ငွေအကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ရေးဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ တတိုင်းပြည်လုံး ပျှမ်းမျှ ၀င်ငွေမှာ အမေရိကန်၊ဂျပန်၊စင်ကာပူတို့တွင် တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၅သောင်းကျော် ရှိကြသည်။ မြန်မာပြည်ကအလုပ်သမားအဆင့်ပင် စင်ကာပူလာလုပ်ပါက တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၂သောင်းခန့် ရနိုင်သည်။ (အခု ၂၀၁၂မှာ ဈေးကြီးသော စင်ကာပူနေစရိတ်၊စားစရိတ်၊ ခရီးစရိတ် နဲ့ ဘီယာဖို့း၊ စီးကရက်ဖိုး၊ ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ဒေါက်ဖိနပ်ဖိုးတွေ နှုတ်လိုက်တော့ ကိုယ်အတွက်မကျန်ဖြစ်နေလေပြီ)။ အမေရိကန်သွားပြီး စားပွဲထိုးလုပ်ပါက ဒေါ်လာ ၃သောင်းခန့် ရနိုင်သည်။ ကမ္ဘာစီးပွားရေးပညာရှင်များနှစ်စဉ် မှတ်တမ်းအရ ၂၀၁၁တွင် မြန်မာပြည်အလုပ်သမား ပျှမ်းမျှဝင်ငွေမှာ (စားပွဲထိုးတယောက်ဝင်ငွေဆိုပါစို့) တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ခန့်သာ ရှိပါသည်။ ဗီယက်နမ် အလုပ်သမားမှာ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ၃၀၀၀ခန့်၊ ထိုင်းအလုပ်သမားမှာ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၉၀၀၀ခန့်၊ မလေးရှားအလုပ်သမားမှာ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ခန့် ရရှိပါသည်။ ထိုပျှမ်းမျှဝင်ငွေများမှာ Basic Pay နှင့် အလားသဏ္ဍန်တူပါသည်။
ကျွန်ုပ် စင်ကာပူတွင် တလဒေါ်လာ၁၀၀၀ ရသောအလုပ်ကို လုပ်နေရင်း၊ အလုပ်ပြောင်းပြီး အလုပ်ရှင်အသစ်က တစ်လဒေါ်လာ၂၀၀၀ ပေးသော အဆင့်မြင့်အလုပ် ဥပမာ ..အလုပ်သမားအဆင့်မှ၊ မန်နေဂျာအဆင့် အလုပ်ကို လုပ်ခိုင်းပါက လုပ်နိုင်သည် ညာပြောပြီး အလုပ်ရလဲ တလမခံ၊ အလုပ်ပြုတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
တိုးတက်လိုသူများသည် ကောပီအရင်လုပ်ရသည်။ သူများလုပ်တာ ဥပမာ ဆရာ၊စီနီယာများ လုပ်တာကို လေ့လာသင်ယူ၊အတုယူရသည်။ နိုင်ငံသားများ ပျမ်းမျှဝင်ငွေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မြန်မာအတုယူသင့်သော နိုင်ငံမှာ ဗီယက်နမ်ဖြစ်သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ ထိုင်းစတိုင်၊ မလေးစတိုင်၊ စင်ကာပူစတိုင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွားလုပ်ပါက ဆင်းရဲ့သော မြန်မာလူထုအတွက် အခက်ခဲဖြစ်မည်။ တရုပ်စတိုင်ကတော့ လုံးဝမကျင့်သုံးအပ်ကြောင်း မြန်မာများ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ (အစိုးရလူကြီးများက ကျင့်သုံးနေဆဲပင်)။
ကျွန်ုပ်အတွက် ဗီယက်နမ်စတိုင် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဆင်းရဲသော မြန်မာများအတွက် သင့်လျှော်သည်ဟု ထောက်ခံပါသည်။ မြန်မာလူငယ်များစွာ မကြာခင် ဗီယက်နမ်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လာရောက်လေ့လာကြသောအခါ …မြန်မာများနှင့် ဘာခြားနားသလဲမြင်လာမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းကြွမ်းကျင်မှု၊ စက်ပစ္စည်းများ ကွာလတီတွင် မြန်မာက သာသည်ဟု မြန်မာ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦး ဗီယက်နမ်လာရောက်စဉ် မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။
ဘာကွာခြားလို့ ဗီယက်နမ်က မြန်မာထက် ၃ဆလောက် ၀င်ငွေကအစ သာလွန်နေရသလဲ ..ဆိုတော့ Attitude ဟုခေါ်သော စိတ်နေသဘောထားဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်များသည် အထက်လူကြီးကို ကလန်ကဆန် လုပ်ခဲပြီး၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်တတ်မှုသည် အဓိကဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
တဦးချင်း လုပ်ကိုင်မှုများကို အောက်ပါ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းမှုများဖြင့် စတင်ကြည့်ရှု၊လေ့လာကြပါမည်။
အထက်ပုံများကို ကြည့်ပါက ယောင်္ကျား၊မိန်းမ မရွေး အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် စက်ဘီး၊ ထော်လာဂျီအဆင့်မှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အစိုးရကလည်း ဗီယက်နမ်တ၀ှမ်း လမ်းများကို ဖြူးနေအောင် ဖေါက်ပေးထားသည်။ ကွန်ကရိ လမ်းမဟုတ်၊ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်သည်။ ကွန်ကရိလမ်းဆိုပါက တာယာများ ခဏခဏလဲမည်။ တိမ်းမှောက်သေကျေမှုများရှိမည်။ ကားဘီးရော၊ ကွန်ကရိလမ်းပါ ခဏခဏပျက်စီးမည်။ ကတ္တရာလမ်းက ကုန်ကျစရိတ်ကြီးသော်လည်း ရေရှည်တွင် ကားတာယာသက်သာမည်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် တာယာဘိုး တစ်ဦးချင်းသက်သာမှုသည် နိုင်ငံတော်ငွေ သက်သာခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်ဟူသော အယူအဆ၊ ဗီယက်နမ်အစိုးရလူကြီးများတွင် ရှိသည်။
လူတိုင်း မိမိမိသားစုအတွက် အလုပ်လုပ်ရသည်။ မိသားစုနှင့် အပမ်းဖြေ၊ ခရီးထွက် စားသောက်ရသည်။ လူဘ၀ အရသာဖြစ်သည်။ ဇနီးမောင်နှံ၂ယောက်၊ သမီးရီးစား၂ယောက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးနှင့် အတူသွားလာ ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ကလေးရပါက ၂ယောက်အထိ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွင် တင်ဆောင်၊ သွားလာကြသည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ် အမြန်နှုန်းကို မြို့ထဲတွင် ၃၀၊ ၄၀ ကီလိ်ုမျှသာ အလိုက်သိသိ မောင်းနှင်၊ တိမ်းရှောင်ကြသောကြောင့် ယဉ်တိုက်မှုနည်းပါးသည်။ အလွန်များလှသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်အုပ်စုလိုက် သွားလာချိန်တွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် နားလည်မှုဖြင့် အရှိန်ကိုထိန်ပြီး၊ ရှောင်တိန်း၊ သွားလာခြင်းကြောင့် တိုက်မှုဖြစ်ရာတွင်လည်း အသက်အန္တရယ် နည်းပါးလှပါသည်။အောက်ပုံ အများစုသည် မိသားစုလိုက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို စုပေါင်းစီးနင်းနေပုံများဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်လမ်းမပေါ်တွင် မထူးဆန်းသော မြင်ကွင်းများ၊ ရှက်စရာမလိုပါ။ ရဲ၊ လုံခြုံရေးကလည်း မဖမ်းပါ။ နှေးနှေးစီးနေသရွေ့ မဖမ်းဆီးပါ။
21-nov-2006 (speed is generally 40-60km , riding with care, understand each riders)
မိသားစု – ခရီးသွားခြင်းဓါတ်ပုံများ (ဗီယက်နမ် ၂၀၁၂)
နောင် ၁၀နှစ်အကြာမှာ ဗီယက်နမ် ဘတ်စ်ကားနဲ့လူထုခရီးသွား ရထားစနစ်များ ဂျပန်လို တိုးတက်လာမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားတိုင်း မော်တော်ကားဝယ်စီးနိုင်မဲ့အချိန် ရောက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ မော်တော်ကားဈေးကြီးအောင် Tax 300% & Patrol price almost same as USA ကားအခွန် ၃၀၀%၊ ဓါတ်ဆီဈေး အမေရိကန်နိုင်ငံလောက် ဈေးကြီးထားလို့ မိသားစုခရီးသွားလည်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ ခရီးသွားကြပါတယ်။ တက္ကစီဈေးနှုန်းလည်း ကြီးတော့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုပဲ မရှိမဖြစ် သုံးနေကြပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ကို ၄ယောက်စီးသွားလည်း ဟာသလုပ်မဲ့လူမရှိ၊ ဖမ်းမဲ့ရဲလဲမရှိ၊ ကလေးကို ဆိုင်ကယ်ရှေ့တင်သွား၊ ဆိုင်ကယ်နောက် မိခင်နဲ့ခါးပတ်ပြီး စီးသွားလည်း နိုးပရော်ဘလမ် No Problem ပါပဲ။ အထက်မြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီးများလည်း မကြာခင် ဗီယက်နမ်လို ဆိုင်ကယ်မြို့များဖြစ်နေပါပြီ။
Now, 2012 .. regulation with light helmet
လမ်းကြိုလမ်းကြားများတွင် ဈေးဆိုင်တန်းများစွာရှိသည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဈေးဝယ်ကြသည်။ လမ်းလျှောက်နေသူ တွေ့ပါက ထိုသူသည် နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ဖို့ လမ်းများပါသည်။ ဗီယက်နမ်တွင် နိုင်ငံခြားသားကိုလည်း အထူးတဆန်း၊ မဆက်ဆံသလို့ မတန်မဆ၊ ဈေးရောင်းခြင်းများလည်း မရှိပါ။ သာမန် ဗီယက်နမ် လူထုသည် လိမ်လည်စားသောက်မှု နည်းပါးသည်။ သို့သော်ဆိုင်ဂုံမြို့ကြီးများတွင် အင်္ဂလိပ်စကား ကျွမ်းကျင်စွာပြောတတ်သူ မြို့ကြီးသားများကတော့ နိုင်ငံခြားသားကို လိမ်လည်ဖို့ လမ်းများပါသည်)။ ရုံးတက်၊ရုံးဆင်းချိန်များတွင် ထိုကဲ့သို့ ပိတ်ဆို့မှုများ ရှိသည်။ သို့သော် လိမ်ကောက်မောင်းနှင်ခြင်းအားဖြင့် ထွက်ပေါက်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ လုံးဝပိတ်ဆို့ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ထိုနိုင်ငံတွင် အလုပ်သွားလုပ်စဉ် ၂၀၁၂ အတွေ့အကြုံများ၊ ခရီးသွားမှတ်တမ်းနှင့် ဗီယက်နမ်လူမျိုးတို့၏ စိတ်နေသဘောထားနှင့်မြန်မာအကြောင်း၊ မြန်မာပြည်တွင် မိတ်ဆွေများအတွက် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။ ပြည်ပတွင် ရှိသူများ၊ အင်တာနက်သုံးနိုင်သူများသည် မြန်မာ့လူဦးရေ၏ ၁ရာနှုန်းမျှသာဖြစ်သည်။ ပြည်ပရောက်မိတ်ဆွေများ ဒေါင်းလုပ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ပြည်တွင်းမိတ်ဆွေများအတွက် စာအုပ်သာလျှင် အဓိကဖြစ်နေဆဲပင်။ အင်တာနှေးသည် မြန်မာပြည်၂၀၁၂တွင် အသုံးမ၀င်သေးပါ။ အီးမေးနှင့်ချက်တင် လုပ်နိုင်သည့်အဆင့်မှ နောက်၂နှစ်တွင် ဗီယက်နမ်နီးပါး ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ မြန်မာလူထု (လူငယ်များ) သုံးစွဲနိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
eBook to download http://murann.com/vietnam.pdf
Last Update: 22-Sep-2012 (Ho Chi Minh City)
Subject: Vietnam riders
မဲခေါင်မြစ်သည် ကမ္ဘာ၁၂ခုမြောက် အရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်ပြီး၊ ၄၃၅၀ ကီလိုမီတာရှည်လျှားသည်။ တိဘက်ပြည်တွင် မြစ်ဖျားခံခဲ့ပြီး၊ တရုပ်ပြည်၊ ယူနန်ပြည်နယ်ကိုဖြက်သန်းကာ၊ မြန်မာ၊ လာအို၊ ထိုင်းနိုင်ငံ တို့မှတဆင့်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနုံပင်မြို့တော်ကိုဖြက်ပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့ (ဆိုင်ဂုံမြို့) အောက်ဖက် မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်း Mekong Delta အဖြစ်အဆုံးသပ်သည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို ဆွဲဆောင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ၆နိုင်ငံပူပေါင်းပြီး မဲခေါင်မြစ်ကို ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသည်။ မဲခေါင်မြစ်သည် တရုပ်၊ယူနန်ပြည်နယ်၊ မြန်မာနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံများ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် အဓိကကျသည်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:စာအုပ်စင်, ဇော်အောင် (မုံရွာ), ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ
6 Responses to ဗီယက်နမ်သို့ အလုပ်သွားလုပ်ခြင်း နှင့် ဆောင်းပါးများ ကောက်နုတ်ချက် (Zaw Aung (Monywa))
Sein Tun on December 10, 2012 at 10:12 am
ဆရာ ကိုဇော်အောင် ခင်ဗျား,
ဗီယက်နမ်တိုးတက်ခြင်းအပေါ် ကျွန်တော့တစ်ဦးခြင်းအမြင် အတိုချုပ်ပြောရရင်
သွားလေသူ သမတဟိုချီမင်း (Uncle Ho) နဲ့သူရဲ့ပညာရေးရည်မှန်းချက် တွေက အခရာကျ
– ဟိုချီမင်းသေတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ သူရဲ့အရိုးပြာသာဖြစ်ပါတယ်။
– ကျွန်တော်နဲ့ ၈နှစ်ခန့် (၁၉၉၉ – ၂၀၀၇) အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ် စီနီယာ
အင်ဂျင်နီယာအချို့ဟာ ဟိုချီမင်းရဲ့ မြေအောက် (ဗုံးခို) စာသင်ခန်းထွက်တွေဖြစ်ပြီး
သူတို့ကို (၁၉၆၈ ခုနှစ် အမေရိကန်နဲ့ စစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာတောင် စာအသင်
အပျက်မခံဘဲ) Eastern Europe Communist Block တိုင်းပြည် (GDR, Czech,
Rumania, Russia & etc) တွေဆီကို မီရထားခရီးနဲ့ ပီကင်းမှတဆင့် ပညာသင်
– သူတို့ထဲက ထူးချွန်သူတချို့ဟာ ၀န်ကြီးအဆင့်အထိ ပေါက်မြောက်ခဲ့ကြတယ်လို့
– ဗီယက်နမ်မှာ ကျွန်တော်နေခဲ့ ၁၉၉၉ – ၂၀၀၇ ကပင် အသက် ၃၅ – ၄၀ အရပ်သား
အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက် တန် ၄၀၀၀ (အိတ် ၈၀,၀၀၀) ကျ ဘိလပ်
မြေ ဒုစက်ရုံမှူး / စက်ရုံမှူး ဖြစ်နေကြပါပြီ။
– နောက်ဆုံး ကျွန်တော်ထင်တာတစ်ချက်ကတော့ ဟိုချီမင်းရဲ့ညာလက်ရုံး ယခုသက်ရှိ
ထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ ဗီယက်နမ်စစ်သူရဲကောင်ကြီး General Nguyen Vo Giap ရဲ့
သူ့အချိန်က တရုတ်နဲ့ ခပ်ခွါခွါ နေရေး ပေါ်လစီများလား?။
Htin Mg on December 10, 2012 at 8:16 pm
နေရာတကာဗီယက်နမ်ကိုအတုယူစရာမလိုပါ ဆိုင်ကယ်တွေများတော့ လေထုညစိညမ်းမှု ဆီဖိုး လမ်းပိတ်ဆို့မှု စတဲ့စရိတ်တွေပိုများတာပေါ့ ဆိုင်ကယ် စီးခွင့်ပြုမဲ့အ စား အများသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဘတ်စကား မြို့ပါတ်ရထား စနစ်ကို အမြန်ဆုံးတိုးတက်အောင်လုပ်သင့်တယ် စာရေးသူက မသိမသာနဲ့ တရုပ်ဆိုင်ကယ် ရောင်းရအောင် ကြံနေတာလား တရုပ်သွေးပါတယ်ထင်တယ် ကမ္ဘာမြို့တော်အများစုမှာ ဆိုင်ကယ်တွေ အများကြီးစီးနေတာမတွေ့ရဘူး၊၊
san nay yar on December 10, 2012 at 10:59 pm
You criticizer on the article is out of bound.
You, Htin Mg, must be Burmese.
There are many good things in the article.
zawgun on December 11, 2012 at 4:27 am
Burmese are so disguised to Chinese
မောင်ပျာလောင် on December 11, 2012 at 2:20 am
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ စာလုံးတစ်ထောင်ထက်ပိုပြီးသရုပ်ဖေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်ထာပါဘဲ။ မြန်မာစာရှု့ သူတွေ အတွက်တော့ တန်ဘိုးရှိလှပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံများဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါ။ အခြားမှကူးယူဖေါ်ပြတာဆိုရင် Photo Credit (မည်သည့်နေရာမှ) ကူးယူခဲ့သည်ဟုဖေါ်ပြလျှင်မကောင်းဘူးလား ? ၊ ဆရာလုပ်ထာမဟုတ်ပါ။ အခြားစာဆောင်တွေမှာပါတာဖတ်ဖူးလို့ ပါ။
Zaw Aung on December 11, 2012 at 8:13 am
ဟုတ်ပါတယ်။ အနစ်နာခံ၊နိုင်ငံအတွက် လူကြီးများကနမူနာပြခဲ့ခြင်းပါ။ ဓါတ်ပုံများတော့ ကူးယူဖေါ်ပြတဲ့မူရင်းကိုရှာဖို့ ခက်ခဲလို့ .Photo Credit မထည့်ဖြစ်ပါ။ လေထုညစ်ညမ်းစေတဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ် များပြားလွန်းတာလည်း တရုပ်၊ကိုးရီးယားတွေလို ဘက်စကား၊ရထား လူစီးစနစ် လုပ်ဖို့ ငွေမတတ်နိုင်သေးတဲ့ အတွက်ပါ။ မြန်မာပြည်တော့ ကားအရမ်းပေါနေပြီး..လမ်းကြမ်းတော့၊ ကားပျက်မြန်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့..ဗီယက်နမ်မှာ အဆင့်နိုမ့် တရုပ်ဆိုင်ကယ် (ပျက်လွန်းလို့) လုံးဝ မသုံးကြပါ၊ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယား၊ ထိုင်းမိုဒယ် ဆိုင်ကယ်များကို ပြည်တွင်းမှာပဲထုတ်လုပ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တိုးတက်လာရင်-ဗီယက်နမ်ပုံစံ မဟုတ်မှာတော့ သေချာပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံစတိုင်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ အိန္ဒိယ၊တရုပ်စတိုင်တော့ ကျုပ်မလိုလားပေမဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ် Result ကိုမမှန်းဆနိုင်ပါဘူး။ လေးစားလျှက်..